ကျောက်စိမ်းအကြောင်း နဲနဲလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျောက်စိမ်းအကြောင်း နဲနဲလေး
Posted by ေမာင္ ေပ on Aug 23, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 26 comments
ဒီနေ ့ကျောက်စိမ်းပညာ သင်တန်း ကို သွားခဲ့ပါတယ် ။
သင်တန်း က ရက် ၃ဝ သင်မယ် လို ့သိရပါတယ် ။ တစ်ဆင့်ချင်း စီ နားလည်အောင် သင်ပေးသွားမယ့် သင်တန်းပါ ။
ဒီနေ ့ကျွန်တော့် သင်ခဲ့ ၊ နားလည် ခဲ့ရတာလေး တွေ ကို ပြန်ပြောပြ ချင်ပါတယ် ။ အနည်းအကျဉ်းလေးပါ ။
နောက်နေ ့တွေ မှ ဆက်သင်ကြားရသမျှ ကို ဆက်လက် တင်ပေးသွားပါမယ် ။
သိနေပြီးသား ဖြစ်နေရင်တော့ တစ်ခြား ပို ့စ်ကို ကျော်ဖတ်လိုက်ပါနော်
မိချောင်းမင်း ရေခင်း ပြသလို ဖြစ်မှာ ကို အားနာလို ့ပါ ။
မသိ သေးသူ များအတွက် ဆိုရင် တော့ ၊ ကျွန်တော့် ပို ့စ်လေး က တစ်ခုခု ပေးစွမ်းနိုင်မယ် လို့မျှော်လင့်ပြီး ရေးတင်ပါတယ်
ကျောက်စိမ်း ဟာ ကမ္ဘာပေါ် မှာ ၃ နေရာ ပဲ တွေ ့ရပါတယ် ။
အမေရိကန် နိုင်ငံ က တက္ကဆက်စ် ပြည်နယ် ၊ တရုတ် က ကွမ်ကျိုးပြည်နယ် ရယ် နဲ့ကျွန်တော် တို့မြန်မာ နိုင်ငံ က ကချင်ပြည်နယ် တို ့မှာပါပဲ ။(ကွမ်ကျိုး ဟာ မှားနေရင် ပြင်ပေးကြပါ)
ဒီ ၃ နေရာ မှာ ပဲ တူးဖော် တွေ ့ရှိနိုင်ပါတယ် ။
ယနေ ့ထိ ၊ ဒီ၃ နေရာ က လွဲ လို့တခြား ဘယ်နေရာ မှာ မှ မတွေ ့ရသေးပါဘူး ။
ဒီ၃နေရာ ထဲ မှာ မှ ၊ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကျောက်စိမ်း ကို မြန်မာ နိုင်ငံ မှာပဲ တူးဖော် ရရှိနိုင်ပါတယ် ။
ဆိုလိုချင်တာ က ကျန် ၂ နေရာ က ထွက်တဲ့ ကျောက်စိမ်းဟာ မဖြစ်စလောက် အနည်းအကျဉ်းသာ ဖြစ်ပြီး ၊ အရည်အသွေး ကြ တော့ လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကို မမှီပါဘူး ။ ဒါကြောင့်မို ့လည်း မြန်မာ ့ကျောက်စိမ်း ဟာ ကမ္ဘာမှာ နာမည် ကျော်ကြား နေရတာပါ ။
ကျောက်စိမ်း ကို ဘယ်နေရာ တွေ မှာ သုံးသလဲ ဆိုရင်….ပုတီး၊လက်ကောက် ၊ဆွဲပြား ၊ ဘုရားဆင်းတု ၊ ပန်းပု ထုခြင်း ၊ ကျောက်စိမ်းပန်းချီ စသည်ဖြင့် သုံးခဲ့ကြပါတယ် ။
ယနေ ့တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီး မှာတော့ ပိုက်ဆံ တတ်နိုင်သူများ ဟာ ကျောက်စိမ်းကို ပါကေးပြား အရွယ် ထုတ်လုပ် ပြီးနေအိမ်တွေ မှာ ပါကေးတွေ ခင်းလာပါတယ် ။
( ချမ်းသာကြွယ်ဝ မှုပေါ့)
အိမ်တွေ မှာ မီးဆိုင်းတွေ ကို ကျောက်စိမ်း တွေ နဲ ့ထုတ်လုပ်လာတယ် ။
ကားတွေ ထဲ က ဖင်ထိုင်ခုံ အောက်မှာ ကျောက်စိမ်းလုံးလေး တွေ ကို အခင်းသဖွယ် ယက်ပြီး ခင်းကြတယ် ။
ကျောက်စိမ်း ရဲ ့သဘောသဘာဝ က အအေးဓါတ်ရှိပါတယ် ။
ရေနံသူဌေး နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ၊ အာရပ် တွေ ဆီ မှာ ဆိုရင် ကျောက်စိမ်းကုတင် ၊ ကျောက်စိမ်း ထိုင်ခုံ စသည်ဖြင့် သုံးစွဲ ကြပါတယ် ။
ကျွန်တော် သိခဲ့ ရတဲ့ ယမ်း ( crystal ) အကြောင်းလေး ရေးပြပါမယ် ။
သာမန် လမ်းဘေး က ကျောက်တုံး တစ်တုံး နဲ့ကျောက်စိမ်း တုံး(အရိုင်းတုံး)နဲ ့၊ ဘယ်လို ခွဲ ခြား မလဲ ဆိုရင်…
ဒီ ယမ်း ပါမပါ ကို ကြည့်ပြီး ခွဲ နိုင်ပါတယ် ။
ကျောက်စိမ်းတုံး အရိုင်းတုံး တွေ ကို နေရောင်အောက် မှာ အနီးကပ် ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ၊ လက်လက် လက်လက် နဲ ့လက်နေတဲ့ အမှုန် လေး တွေ ကို မြင်ရပါမယ်
အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာ ပေးရရင် ၊ စာရွက် အဖြူ တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ဘောပင် နဲ ့အစက်ကလေးတွေ ချလိုက်သလို ပါ ။ အစက်လေးတွေ ပါ ။ လက်နေပါတယ် ။ မှောင်တဲ့ နေရာမှာဆိုရင်တော့ ကျောက်ကြည့် ဓါတ်မီး နဲ ့ထိုးကြည့်ရင် မြင်ရမှာပါ ။
( ဒီနေရာ မှာ ပြောချင်တာ တစ်ခု က တော့ ၊ ရွှေတို ့ငွေတို့အစရှိသဖြင့် အခြား သတ္တု များ ပါဝင်တဲ့ ကျောက်ရိုင်းတုံး မှာလည်း လက်လက် လက်လက် တောက်နေပေမယ့် ၊ ကျောက်စိမ်း နဲ ့တော့ တခြား စီပါ ။ ရွှေ တို ့ငွေ တို ့မှာ လက်လက် လက်လက် က သူ ့အရောင် အလိုက် တောက်ပါတယ် ။ )
အဲဒီ လက်လက် လက်လက် လေးတွေ ကို ယမ်း လို ့ခေါ်ပါတယ် ။
ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံး ကို ယမ်းပါဝင်မှု ၊ ယင်း ပါရှိမှု ပုံစံ ကို ကြည့်ပြီး ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံး ကို အခုလို ခွဲခြား လို ့ရပါတယ် ။
ယမ်းချောရင် အတွင်းက ကျောက်စိမ်းသား ချောပါမယ် ။ ( ဆိုလိုချင်တာ ယမ်း က မှုန်မှုန်လေး တွေ နဲ ့စုနေတာပါ )
ယမ်းကြမ်း ရင် အတွင်းက အသားကြမ်းပါမယ် ။ ( လက်လက် လက်လက် ယမ်းတွေ ဟာ ကျဲနေတာပါ )
ယမ်းစိပ် ရင် ကျောက်သား တင်းပါမယ် ၊ ကျောက်သား ကောင်းပါမယ် ( လက်လက်လေးတွေ စုနေတာပေါ့ )
ယမ်းကျဲ ရင်တော့ ကျောက်သား မကောင်းပါဘူး ။ (ဒီလိုကျောက်မျိုး ကို ဝယ်ရောင်း မလုပ်သင့်ပါဘူး )
အဓိက ယမ်း (၃) မျိုး ရှိပါတယ်
ယမ်းလုံး ၊ ယမ်းရှည် နဲ ့ယမ်းပြား ပါ
ယမ်းလုံး ဆိုတာ က ကျောက်ရိုင်းတုံး ရဲ ့အခွံ ၊ မျက်နှာပြင်မှာ လက်လက် လက်လက်လေး တွေ က ၊ သကြားပွင့် ဆားပွင့်လေးတွေ လို ဖြစ်နေတာပါ ။ အဲဒီ ကျောက်ဟာ အရည် ကောင်း ပါတယ် ။
ယမ်းရှည် ဆိုတာ က ကျောက်ရဲ ့မျက်နှာပြင် မှာ အပ်ချောင်းလေးတွေ လို ၊ ဟင်းချိုမှုန် ့ရှည်ရှည်လေးတွေလို မြင်ရတာပါ ။ အဲဒါမျိုး တွေ ့ရရင်တော့ အဲဒီကျောက် ဟာ အသား ကောင်းပါတယ် ။
ယမ်းပြား ဆိုတာ ကတော့ လက်လက် လက်လက် လေးတွေ ဟာ အရမ်းကြီး အရွယ် ကြီးနေမယ် ။( ဆားပွင့် ၊ သကြားပွင့် အရွယ် ထက် ပိုမယ် ) ဒါဆိုရင် အရည်ရော အသားရော မကောင်းနိုင်ပါဘူး ။
ယမ်းပြား မှာ ကို ၃ မျိုး ထပ်ခွဲ နိုင်ပါတယ် ။
(၃)ခွေးရိုးထိုး ဆိုပြီး ပေါ့
ယင်ထောင်ယမ်း ဆိုတာ က လက်လက် လက်လက် တောက်နေတဲ့ ယမ်းပေါ့ ။ ယင်ကောင် တစ်ကောင် အရွယ် ခန် ့ရှိပါတယ် ။ သူပါရင် အရည်အသား မကောင်းဘူး ။ ဈေးအများကြီး မပေးသင့်ပါဘူး ။
မာယား ဆိုတာ က ယင်ကောင် အရွယ်ထက် ပိုကြီးမယ် ။ ရှောင်ရပါမယ် ။
ခွေးရိုးထိုး ဆိုတာ က တော့ မာယား ထက် အရွယ်ပိုကြီးတယ် ။ သူ ့ကို တွေ ့ရင် အဲဒီကျောက် ကို ရှောင်ရပါမယ် ။
ယမ်း ဆိုတဲ့ သဘာဝ ဟာ ၊ ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံး ( မဖြတ်မှီ ) ရဲ ့အခွံ မှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ကျောက်သား အတွင်း မှာ ရှိတတ်ပါတယ် ။
ယင်း ကို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင် မယ် ဆိုရင် ၊ ကျောက် ကို မခွဲ မဖြတ် မှီ..ပြင်ပ က ကြည့်ရုံ နဲ ့ပင် ၊ အထဲ က ကျောက်သား ကောင်းမကောင်း ဖောက်ထွင်း သိမြင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကဲဗျာ……ကျွန်တော့် ပို ့စ် ကို ဒီမှာ ခဏ ရပ်ပါဦးမယ်
သိထားသမျှ လည်း ရေးပြ ပြီးခဲ့ပါပြီ ။ နောက်နေ ့သင်တန်း သွားပြီး မှ သင်ကြားသမျှ ကို ထပ်ပြီး ရေးတင်ပေးပါဦးမယ် ။
ကျွန်တော် ရေးတင်တဲ့ ပို ့စ် ဟာ အပလာ ဖြစ်စေခဲ့ရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ရေးတင်ရခြင်း ကတော့ ကျွန်တော် သိထားသမျှ လေး တွေ ကို ပြန်ဝေမျှ ပေးချင်လို ့ပါ ။
သိပြီးသား ကျောက်စိမ်းလုပ်ကိုင် နေသူ တွေ အတွက်တော့ ၊ ကျွန်တော် ့ပို ့စ်ဟာ အပလာ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အတွက် ဆောရီးပါ ။
အဓိက ကတော့ ကျောက်စိမ်း အကြောင်း မသိသူတွေ ၊ ကျောက်စိမ်း ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ ကို သိချင်သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပါတယ်
နောက် ပို ့စ်တွေ မှာ ဓါတ်ပုံ များနှင့် တစ်ကွ ဆက်လက် တင်ဆက်ပေးပါမယ် ။
( အား လုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် )
Thank you very big May Paung, really interested in stones (any types of gem),and had no chance to learn about them. I will copy and keep all your post about your class ,pls allow me.
MG ကို polish တင်ပေးလိုက်သော မောင်ပေ ရေ….
အကြောင်းအရာ အချက်အလက် စုံလင်စွာနဲ့ အသိပညာပေး ပိုစ့်တစ်ခုမို့ ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
နောက်သင်တန်းအကြောင်းတွေကိုလည်း ဆက်လက်တင်ပေးဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ ကျောက်စိမ်းကြောင်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျို.
မန်းထိ သွားမတတ်နိုင်ဘူး ဆိုတော့ MG မှာ ပဲ မောင်ပေ့ သင်တန်းတက်တော့မယ်..
ပြီးမှ မေပေါင့်ကို အင်တာနက်ဖိုး ပြန်ပေးပါ့မယ်..
သင်တန်းခလဲ ကုန်…ပြန်သင်ပေးခလဲ ကုန်နေမှာပေါ့..ဟုတ်ဘူးလား..
အဲတော့..တဂျီးဆီမှာ Internet ဖိုုးဆိုပြီး.. ကြိုတင်ပွိုင့် အရင် ထုတ်ထားလိုက်ပါ မေပေါင်..
တစ်တိန်းပြည့်ရင် ပြန် ပေးပါ့မယ်..
မှတ်ချက်။ ။ဤပို ့စ်သည် အာပလာပို ့စ် မဟုတ်ကြောင်း ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ခံပါသည်
ယမ်းကောင်းကတော့ ထက်ထက်မိုးဦးကြော်ငြာခဲ့တဲ့ ဗူးနို့ဆီပါ။ ကျောက်စိမ်းအကြောင်း မသိပါဘူး။ ကျောက်ဖြူကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတာ သိတယ်။ ကျောက်မှန်သမျှ တရုတ်ကြီးက သူပိုင်တယ်ထင်လို့ အခုအဲဒီမှာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းဆောက်နေပါပြီ။
တရုတ်တွေကတော့ ကျောက်စိမ်းတော်တော်ကြိုက်ကြတယ် …
ကျောက်စိမ်းကောင်းကောင်းနဲ့ လက်ကောက်လုပ်ဝတ်ထားရင် အေးတဲ့ရာသီမှာနွေးပြီး ပူတဲ့ရာသီမှာအေးတယ်လို့ ပြောတာပဲ … မြန်မာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အစိမ်းနဲ့အဖြူအကြောင်းမေးတော့တာပဲ … ကျွန်မကတော့ အဖြူအစိမ်းဆို ကျောင်းဝတ်စုံပဲသိတယ် …
စိတ်ဝင်စားပါတယ်၊ အခုအတိုင်း သေချာလေး ရေးသွားရင် ဖတ်သူလဲ အသိတိုး
ပို့စ် ပြီးသွားရဲ့ ဦးလှဝင်း ရဲ့ ရတနာ အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေလို စာအုပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
ရေးပါဗျာ.. သိတဲ့သူက ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလဲ ဗဟုသုတ ရတာပေါ့…….. ဒါနဲ့ သင်တန်းမှာ အဲဒီကျောက်တုန်းတွေနဲ့ လက်တွေ့သင်ရရင် ဓါတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့ပါလားဗျာ…. ပုံနဲတွဲကြည့်ရတော့ ပိုကောင်းမလားလို့ ကျေးဇူးပဲဗျာ
အလယ်အလတ်တရုတ်လူတန်းစား. လာမဲ့..ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်း.. ၂ဆ တက်လာမယ်တဲ့..။
ဆိုတော့.. ဝယ်လိုအားအရမ်းတက်လာမဲ့ သဘော..။
စိန်ကို.. ဒီဘီးယား.က… ဂျူးတွေလုပ်သလိုပေါ့…။
သူကြီးကပြောနေ မနက်ကပဲ weekly မှာ ဒါလေး ဖတ်ရတယ် –
“ဒီနှစ်မိုးတွင်းတော့ ခါတိုင်း နှစ်တွေထက် ပိုဆိုးတယ်။ ကျောက်ရရင်တောင် ဘယ်မှာ ရောင်းရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ဖားကန့် ဆိုင်းတောင်ဘက် သွားရောင်းတော့လည်း အိမ်တံခါးတွေပိတ်ပြီး အောက်ပိုင်းဆင်းသွားကြတာ များတယ်။ ခါတိုင်း ဈေးကွက်မကောင်းဘူးဆို တာက သိန်း ၁၀၀၊ ၂၀ဝ ကျောက် တွေ ရောင်းရသေးတယ်။ ဒီနှစ်တော့ ကျပ်သိန်း ၁၀ဝ ရောင်းရမယ့် ကျောက်တွေကျပ်သိန်း ၂၀၊ ၃ဝ နဲ့ မနည်းကို ရောင်းရတယ်။ လောပန်တွေ မရှိတော့ ဘယ်လောပန်မဆို ဈေးနှိမ်ပြီး ဝယ်ကြတာ များတယ်။ အောက်ကျောက်တွေဆိုရင်လည်း ခါတိုင်း ကျပ်ငါးသိန်းပေးဝယ်တဲ့ ကျောက် ကျပ်တစ်သိန်းထက် ပိုမပေးဘူး”ဟု လုံးချင်းရွာမှ ပွဲစားတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
မြန်မာပြည်မှာ ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ရင် သူတို့လက်ခုပ်ထဲက ရေဖြစ်နေမှာပဲ
တကယ်က..စိန်ဆိုတာ..ကမ္ဘာမှာ အင်မတန်ပေါပေါများများထွက်တာ…။ အတုလည်းလုပ်ရလွယ်တယ်..။
Blood Diamond ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးမှာပေါ့..။
အဲဒီမှာ.. De Beers, established in 1888 ရဲ့..ကစားကွက်လေးနောက်ဆုံးမှာ မသိမသာလေးပြသွားတယ်.။
အဲဒီစိန်ကြိးကို.. မြေတိုက်အောက်တနေရာမှာ မြုတ်နှံသိမ်းဆည်းလိုက်တာလေ..။
ဒီဘီးယားက အင်မတန်ပေါပေါများများထွက်နေတဲ့.. စိန်တွေကို.. တန်ဖိုးရှိသွားအောင်… အဲဒီအတိုင်းလုပ်တာပဲ..။
အမှုန်အမွှားကနေ.. ကိုဟီးနိုးလို စိန်အထိ..အကုန်ဝယ်သိမ်းပစ်တာ…။
ပြီးတော့.. စုံတွဲတွေကပဲ..မင်္ဂလာဆောင်ရင်..စေ့စပ်ရင်..စိန်မပေးရမနေနိုင်ဖြစ်အောင်.. လူတွေကို…ကြော်ငြာအားနဲ့ ရိုက်သွင်းတာ…။
ဒီနေရာမှာ..ယှဉ်ပြောချင်တာက.. မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းက.. မြန်မာပြည်ကပဲ..အဓိကထွက်ပြီး ..အခုချမ်းသာလာတဲ့..တရုတ်က.. သည်းချေကြိုက်ဖြစ်တာမို့.. လုပ်သင့်တယ်ပြောရတာပါ..။
ဖြစ်နိုင်ရင်.. ဒီဘီးယားက မားကက်တင်းသမားကို..တလ..ဒေါ်လာ သောင်းသိန်းပေး..အကြံဉာဏ်ယူသင့်တာပေါ့..။
အဲဒီလိုမလုပ်ပဲ.. နေတော့.. ပတ္တမြား၊ကျောက်စိမ်း တွေ.. ဈေးကောင်းမရ..နှမြောစရာ…။
ဆိုတော့.. အခုကျောက်စိမ်းဈေးကွက်ပျက်နေတာ.. ယူအက်စ်ရဲ့.. ဂျိပ်အက်ခ် သက်ရောက်မှုတွေလို့ထင်မိတယ်..။
There wasaquarrel between Chinese လောပန် & Myanmar brokers in Mandalay.
It seems, they ( Chinese လောပန် ) were angry for this &
that’s why, they didn’t come to Myanmar & buy ကျောက်စိမ်း.
Chinese is the sole buyer of ကျောက်စိမ်း.
If they didn’t buy, nobody will buy မြန်မာ့ကျောက်စိမ်း.
ဟိုတလောက..မြန်မာတွေ.. တရုပ်ကျောက်ကုန်သည်တွေကို… ကိုယ့်နယ်ပိုင်နက်ထဲကနေ.. ဝိုင်းရိုက်ထုတ်လိုက်တာပဲ..။
“”””ယနေ ့တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီး မှာတော့ ပိုက်ဆံ တတ်နိုင်သူများ ဟာ ကျောက်စိမ်းကို ပါကေးပြား အရွယ် ထုတ်လုပ် ပြီးနေအိမ်တွေ မှာ ပါကေးတွေ ခင်းလာပါတယ် ။”””””
မလွယ်ပါလား. မြန်မာနိုင်ငံတော့ တရုတ်လက်မှာ မြေကြီးတောင်ကျန်ပါဦးမလား။ကုန်တော့မှာဘဲ။ကျွန်မတို ့တောင်နေရာရွှေ ့ပေးရမလိုဖြစ်နေပါပီ
တွင်းထွက်ရတနာတွေ ကိုခုလောက်မြန်မြန်ထုတ်ယူ သုံးစွဲကြဖို ့မကောင်းပါဘူး။သံယံဇာတတွေလဲ ပြ ုန်းတီး၊မြေတွေလည်းပျက်၊ချောင်းတွေမြစ်တွေလည်းတိမ်ကော။အကုန်လုံးဖေါက်ပြန်ကုန်ပါပီ။နိုင်ငံ အနာဂတ်သားမြေးတွေနဲ ့တကယ်နိုင်ငံ တိုးတက်ဖို ့ရာထူထောင်မယ် ဆိုသုံးစွဲတာကို တော့ လက်ခံရမှာပါ။အခုက တော့ ရှေ ့ကသွားလေပြီးသော စစ်အာဏာရှင်များရော ခုစစ်ခွေးလက်ပါးစေများပါ ခုလိုကျောက်စိမ်းပြပွဲတွေက ရောင်းရငွေတွေကိုဘယ်မှာထားနေကြတာပါလိမ့်
ဒီလိုလေးတွေ ဖတ်ရတော့လည်း သင်တန်းတက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်……….. မဆိုးဘူးပဲ။ ဆက်လက်ရေးသားပေးပါဦး။
ဒီလို နည်းပညာ ဖြန့် ဝေ ခြင်း ဟာ တရားဝင် တယ် မဝင် ဘူး ဆို တာ မသိပေမဲ့ ကြို ဆိုမိတာ တော့ အမှန်ပါဘဲ။
လက်တွေ့ မဟုတ်ပေမဲ့ စာတွေ့ အနေ နဲ့ အသေးစိတ် ရေးထားတာ မို့ ဘာမှ နားမလည် သေးတဲ့ သူ တောင် ( ကိုယ် ကို ကိုယ် ဆို လို ပါသည် ) အတော်လေး သဘော ပေါက် ပါတယ်။
ကျောက်မျက်ရတနာအကြောင်းမို့ တကယ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဆက်ရေးပေးပါ စောင့်ဖတ်နေပါ့မယ်။ သွေးတိုးရောဂါရှိသူများ ကျောက်စိမ်းကို အသားနဲ့ထိပြီးဝတ်ထားရင် သွေးတိုးသိပ်မတက်ဘူးလို့ ဖတ်ဖူးတယ်။
အကောင်းဆုံးထွက်ပါတယ်ဆိုတဲ. ကချင်ပြည်နယ်ကြီး အခုကျတော.လည်း မြန်မာတွေနဲ.မဆိုင်သလို
အော် အခုတော.လည်း သူစိမ်းတွေလိုပါပဲလား နအဖနဲ.ဝက်ကြီး လုပ်လို.
ကိုပေ မတွေ.တာတောင်ကြာပြီနော် ကျနော်လည်းရွာထဲသိပ်မလာဖြစ်လို.ဗျ အခုလိုတင်ပေးတာကျေးဇူးပဲနော် ဗဟုသုတရတယ် ကျနော်က ကွန်ပျူတာကလွဲလို. ဘာမှသိတဲ.ကောင်မဟုတ်ဘူး
ဝါတော်ကင်းက ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကောက်ရထားတာ နဲ့ကျောက်စိမ်းအကြောင်းရေးနေတာရယ်
ဖတ်ဘူးသမျှ ကိုတော်ကာရဲ့ ပိုစ့် တွေထဲမှာ ဒီပို့ဟာ အသားအပါဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အရှိန်မပျက် ဆက်ရေးပေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒီအပိုင်းမှာပဲ – ဆက်တွေးစရာလေးတွေရှိပါတယ်။
(၁) ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီသုံးလေးနေရာမှာပဲ ဘာကြောင့် ကျောက်စိမ်းတွေ့ရသလဲ။
(၂) ကျောက်စိမ်းရဲ့ အခွံ ကိုကြည့်ပြီး ဘာကြောင့် အသားရဲ့စရိုက်ကိုမှန်းနိုင်သလဲ။
(၃) ကျောက်စိမ်းကို အခြားကျောက်ထက်အေးတယ်လို့ ဘာကြောင့်ထင်ရသလဲ။
အဲဒါမျိုးလေးတွေကို ကိုတော်ကာ သင်တန်းပြီးချိန်လောက်မှာ question လေးတွေစုပြီး shoot ဦးမယ်။
မေပေါင်ရေးတဲ့ .. ကျောက်စိမ်းအကြောင်း ဗဟုသုတရလို့ .. ကူးထားလိုက်ပါတယ် … ။ တင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။